4 isina kuremerwa kugoverwa kweLinux iyo ichine 32-bit rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi kare kumwe kwekuparadzirwa kweLinux yakakurumbira ndafunga kupedza 32-bit kuvakaTichifunga kuti neuwandu hwehardware nyowani uriko nhasi, kuishandisa ne processor yeiyi dhizaini ingori pfungwa yakaipa.
Zvivakwa zve32-bit rave tekinoroji isingachashandi uye chimwe chezvikonzero chiri nyore, sezvo ichingoziva chete kusvika ku4GB ye RAM uye zvinopfuura pachena nekuti kana iwe ukatowana komputa kubva makore mashanu apfuura, Hardware yayo inoitendera kuti itsigire zvinopfuura izvi.
Asi zvakanaka chokwadi chakasiyana, mushe hatisi tese tine bhajeti rekuve nekombuta nhasi, kana ini ndiri kana mumwe wevanozviona sekuti ini ndinowanzo chengeta zvinhu zvangu.
Tichifunga kuti komputa yangu yakawanikwa anopfuura makore gumi apfuura uye inoramba ichingonaka zvekuti ini ndichiri kuishandisa kutamba mamwe mazita akanaka kwazvo, asi hei, iyi inyaya kubva kune imwe nguva.
Kutora nzira yeichi chinyorwa uye pakukumbira kwevamwe vateveri ve peji, ini ndinouya kuzogovana ndinemi zvimwe Kugoverwa kweLinux uko muna 2018 kuchiri kuenderera mberi nekutsigira 32-bit system uye zvakagadzirirwa zvakaderera-zviwanikwa zvishandiso.
Hapana mubvunzo imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anoshandiswa nemazhinji kugovera, Puppy Linux'sIzvo zvinongoda 128 MB ye RAM uye kuti processor yako inomhanya ingangoita 233Mhz, Anoshamisa haufunge! Ini ndinofanira zvakare kuratidza kuti kugovera uku kune vhezheni yeRaspberry Pi.
Chekupedzisira, iyi distro ine mabheseni maviri, imwe yacho iri kushandisa Ubuntu sehwaro, (unogona kuti, asi Ubuntu yakatosiya 32-bit), Puppy Linux inoshandisa shanduro dzeLTS idzo idzo dzine makore akati wandei ekutsigira saka ndizvo zvichiri zvakanaka kwazvo.
Iyo imwe base ndiyo iyo iyo Slackware inoshandisa uye inoshandisa isiri-PAE LTS kernel.
Kana iwe uchida kuyedza yakaderera-zviwanikwa kugovera, iyo chinongedzo ndeichi.
Iyi distro Yaimbozivikanwa seSlax Remix, ine zvishoma zvinodiwa pa256 MB ye RAM, Iyo yakagadzirirwa kushandiswa paRarama CD / DVD, Live USB uye kunyangwe kuiswa pane yako hard drive, zvakanakisa zvese, iyo inongobata zvakapoterera 300MB.
Zvakare ine dzimwe nzvimbo dzedesktop dzatinogona kusarudza, pakati padzo dziri: Mate, Xfce, KDE, Cinammon, Openbox, Lxde uye Lxqt.
Kana iwe uchida kuyedza kugovera uku kune zvishoma zviwanikwa, iyo chinongedzo ndeichi.
ConnochaetOS eIko kugoverwa kweGNU / Linux kunoitirwa makomputa eX86 Nezvishoma zviwanikwa, zvinovakirwa paSlackware uye Salix OS, iyi distro haishandisi nharaunda yedesktop yakadaro, kana zvisiri inoshandisa IceWM windows maneja akagadzirirwa makomputa ane mashoma zviwanikwa, inowanikwa x86 (32 bit) chete. Nehunyanzvi, ConnochaetOS inotevera KISS musimboti.
ari zvinodikanwa zvishoma Hardware ndeaya:
Iyo i686 processor, inova Pentium Pro kana zvirinani
128 MB ye RAM
Yemahara hard disk nzvimbo ye approx. 3 GB
Kana iwe uchida kurodha pasi iyi 32-bit Linux kugovera, iyo chinongedzo ndeichi.
Es yakagadzikana Debian-based Linux distro yeIntel-AMD x86 inoenderana masisitimu. AntiX inopa vashandisi "AntiX Mashiripiti" munzvimbo inokodzera makomputa ekare. Saka usadhonze iyo yekare komputa izvozvi
Iwe unoda kanenge Pentium ine 266 MHz yeCPU uye 64 ye RAM.
AntiX inowanikwa ye32-bit uye 64-bit zvivakwa, uye inouya mune matatu mavhezheni:
Yakazara, iyo inoisa yakazara yakazara maficha
Base, iyo inobvumira mushandisi kusarudza yavo yekushandisa package.
Core-yemahara, iyo inobvumidza mushandisi kuve izere kutonga pamusoro pekuisirwa.
Kana iwe uchida kurodha pasi ichi chakareruka kugovera, iyo chinongedzo ndeichi.
Pasina imwezve ado, izvi ndizvo zvimwe zvekuparadzirwa kweLinux izvo zvichiri kuenderera muna2018 kutsigira 32-bit processor uye hazvidi zviwanikwa zvakawanda kuti zvishande.
Kana iwe uchiziva chero chimwe chinhu chatinogona kutaura, usazeze kugovana icho mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » 4 isina kuremerwa kugoverwa kweLinux iyo ichine 32-bit rutsigiro
Pindura kuna Apko
Imwe, yakaedzwa uye kuyedzwa: Q4OS.
Pindura kuna Amagi
Lubuntu, chaizvo Ubuntu neLxde desktop
Ndatenda neruzivo. Distros inotaridzika zvakanaka. Ndakaedza AntiX uye zvinotyisa.
ndatenda nemipiro, maropafadzo
Pindura kuna eddy
Kune Slitaz yandinayo yakaiswa pane HP 2140 minilaptop ine 2 gb ye RAM uye ne120 gb SSD disk, zvakareruka, ndinoikurudzira. Ona iyo yekuisa dzidziso iyo yandakaita https://www.youtube.com/watch?v=LjLb54-aiw4
Ini ndinopa imwezve Linux lite 3.8 x86 yakanaka kwazvo mwenje uye ine akawanda mapurogiramu sarudzo